Umbhalo osemthethweni weevidiyo zeWWDC 2016 edlulileyo ngoku iyafumaneka | IPhone iindaba
Umbhalo osemthethweni weevidiyo zeWWDC 2016 edlulileyo ngoku iyafumaneka
Umphakathi ophuhlisayo yenye yeentsika ezibaluleke kakhulu zenkampani kwaye njengobungqina boku siyakubona Umdla ka-Apple ekuthambekeleni koluntu ngalo lonke ixesha. Izolo inkampani esekwe eCupertino isungule i-academy yokuqala yokufunda indlela yokuphucula usetyenziso lwe-iOS eNaples, eya kuthi isebenze kulo lonke elaseYurophu, nangona ingekhe iqale ukusebenza kude kube ngu-Okthobha.
Kwelinye icala, sifumana iindibano zocweyo eziqhutywa yinkampani minyaka le ngaphakathi kwesakhelo seNkomfa yaBaphuhlisi, apho inkampani iveza zonke izinto ezinqabileyo zeenkqubo eziya kuthi zifike kwiinyanga zentengiso kamva, ngoSeptemba njengomgaqo jikelele. Kwezi workshops abaphuhlisi Ungathetha ngokwakho neenjineli zeApple ukusombulula iingxaki, uphakamise imibuzo… Kanye nokufunda indlela yokuphucula indlela abaqhuba ngayo kwi-iOS.
Zonke iividiyo ezingqinelana neWWDC ziyafumaneka ngokusetyenziswa kweWWDC kwiVenkile yeVenkile, kodwa xa kufikwa kumba wokudibana nabo akukho lula kuba kufuneka ubukele ividiyo yonke ukuze ubone ukuba umxholo uluncedo na. Yayo, inkampani ikhuphela ngokusesikweni yonke imixholo yeevidiyo ukuze abaphuhlisi bakwazi ukubuza amagama aphambili ngokukhawuleza ukuba aye ngqo kwisiqwengana okanye kwinxalenye yevidiyo esinomdla kuyo.
Ukuba umzekelo sijonge i-watchOS 3 injini yokukhangela Izakubuyisa ikhonkco kuzo zonke iividiyo apho livela khona elo gama Kunye nombhalo wakhe osemthethweni ukuze singaphoswa naziphi na iividiyo apho athetha khona ngenkqubo yokusebenza yeApple Watch. Oku kubhaliweyo akufumaneki kwisicelo esifumaneka kwiVenkile yeApple, kodwa kufuneka siye kwiportal yonjiniyela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Umbhalo osemthethweni weevidiyo zeWWDC 2016 edlulileyo ngoku iyafumaneka